Rubber Camera Magnets Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Rubber Camera Magnets Factory
Le ntaba eqinile kazibuthe ilungele izibhamu, izibhamu, amavolovolo, amavolovolo, izibhamu, kanye nezibhamu zazo zonke izinhlobo zokufihla ekhaya noma ekuvikeleni imoto, noma ekubonisweni. Kulula kakhulu ukuyifaka ukuze ukwazi ukusetha noma kuphi ngaphandle kwenkinga!
I-Magnetic Gun Mount ene-Rubber Coating
Le ntaba eqinile kazibuthe ilungele izibhamu, izibhamu, amavolovolo, amavolovolo, izibhamu, kanye nezibhamu zazo zonke izinhlobo zokufihla ekhaya noma ekuvikeleni imoto, noma ekubonisweni. Ukuphrinta kwakho kwelogo okuphakeme kuyatholakala lapha.
I-Rubber Ehlanganisiwe Isisekelo Sokubeka I-Magnetic Base ye-Car LED Positioning
Le bracket yesisekelo sikazibuthe yakhelwe uphahla lwemoto i-LED light bar yokubamba nokuma. Isembozo senjoloba esigxotshiwe singumbono wokuvikela ukudweba kwemoto ekulimaleni.
Uzibuthe oqinile we-Neodymium usetshenziswa ngotshani wenjoloba osezingeni eliphezulu, oqinisekisa indawo yokuxhumana ephephile lapho ufaka i-gripper sign kazibuthe ezimotweni njll. Yakhelwe ngesibambo eside esinqunyelwe phezulu, okunikeza umsebenzisi amandla engeziwe lapho ubeka kahle i-vinyl ebucayi abezindaba.
I-Rectangluar Rubber Based Holding Magnet
Lezi zimboni eziwumugqa eziwumhubhu ziyizibuthe ezinamandla kakhulu ezifakwe intambo yangaphakathi eyodwa noma ezimbili. Uzibuthe owenziwe ngenjoloba ukhiqizwa ngokuphelele ngezinto ezisezingeni eliphakeme ngaleyo ndlela uqinisekisa umkhiqizo oqinile nohlala njalo. Uzibuthe wenjoloba onemicu emibili ukhiqizwa ngebanga le-N48 ukuthola amandla athe xaxa
Rubber Embizeni Magnet nge Intambo sangaphandle
Lezi zimboni zenjoloba zifaneleka ngokukhethekile ezintweni ezakhiwe ngozibuthe ngentambo yangaphandle njengokukhangisa okubonisa noma izibani zokuphepha ophahleni lwezimoto. Injoloba yangaphandle ingavikela uzibuthe wangaphakathi ekulimaleni nasekuqinisekiseni ukugqwala.
Rubber Embizeni Magnet nge Intulo Flat
Ngenxa yokuhlangana kukazibuthe wangaphakathi nangaphandle kwengubo yenjoloba, lolu hlobo lukazibuthe lwendawo lulungele ukusetshenziswa ezindaweni ezingafanele ukuklwebheka .Lwenza ukusetshenziswa kwalo kunconyelwe izindatshana ezidwetshiwe noma ezi-varnished, noma zezicelo lapho amandla kazibuthe aqinile okudingekayo, ngaphandle kokumaka
Rubber Camera Magnet nge Intambo Female
Le magnet yembiza yerabha yokumboza iraba ilungele ukulungisa izibonisi ezindaweni zensimbi. Ayishiyi zimpawu endaweni evuthayo yezihloko equkethe ukusebenza okuhle kokulwa nokugqwala ekusetshenzisweni kwangaphandle.